Dabooleyaasha Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Wershadda Daboolka Ka Qaadan Kara
Daboolin Kara 200 SOT
200 SOT Fudud dhamaadka furan SOT & RPT Marka laga reebo lacag dhaqameedku wuu dhamaan karaa, dhammaadka dahabiga ayaa sidoo kale la heli karaa, si loo wanaajiyo aragtida muuqaalka. Waqtigaan, midabada kala duwan ee tuubada ayaa loogu talagalay xulashadaada, sida cagaarka, buluuga, dahabiga, madow, iwm. Xirxirida: Sanduuqyada kartoonka iyo santuuqa
202 SOT Fudud dhamaadka furan SOT & RPT Marka laga reebo qalin dhaqameedku wuu dhamaan karaa, dhammaadka dahabiga ayaa sidoo kale la heli karaa, si loo wanaajiyo aragtida muuqaalka. Waqtigaan, midabada kala duwan ee tuubada ayaa loogu talagalay xulashadaada, sida cagaarka, buluuga, dahabiga, madow, iwm. Xirxirida: Sanduuqyada kartoonka iyo santuuqa
206 SOT Fudud dhamaadka furan SOT & RPT Marka laga reebo qalin dhaqameedku wuu dhamaan karaa, dhammaadka dahabiga ayaa sidoo kale la heli karaa, si loo hagaajiyo aragtida muuqaalka. Waqtigaan, midabada kala duwan ee tuubada ayaa loogu talagalay xulashadaada, sida cagaarka, buluuga, dahabiga, madow, iwm. Xirxirida: Sanduuqyada kartoonka iyo santuuqa
202 RCDL SOT Fudud dhamaadka furan SOT & RPT Marka laga reebo lacag dhaqameedku wuu dhamaan karaa, dhammaadka dahabiga ayaa sidoo kale la heli karaa, si loo hagaajiyo aragtida muuqaalka. Waqtigaan, midabada kala duwan ee tuubada ayaa loogu talagalay xulashadaada, sida cagaarka, buluuga, dahabiga, madow, iwm. Xirxirida: Sanduuqyada kartoonka iyo santuuqa
Aluminium Can 330ml Heerka, Aluminium Can 355ml Heerka, Aluminium Can 310ml Sleek, Khafiifa 200ml Aluminium Can, Khafiifa 310ml Aluminium Can, Aluminium Can 250ml Jilicsan,